15 Siyaabood oo Lacag looga Sameeyo Dib -u -warshadaynta 2022 - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn 15 Siyaabood oo Lacag looga Sameeyo Dib -u -warshadaynta 2022
15 Siyaabood oo Lacag looga Sameeyo Dib -u -warshadaynta 2022
Ma ogtahay in weelka dib loo warshadeeyay uu keydin karo tamar ku filan si uu telefishinka u yeesho saddex saacadood? Mise taasi waxay u samaysataa shaati halkii aad ka iibsan lahayd mid cusub waxay badbaadin kartaa in ka badan 700 gallon oo biyo ah?
Haa! Dhalooyinkaaga caagga ah, buugaag duug ah, baytari baabuur, taleefanno duug ah, iyo waxyaabo kale oo badan ayaa kuu samayn kara lacag aad ku bixin karto, ku maalgelin karto, ama ku kaydin karto.
Tani ma noqon karto hab joogto ah oo lacag lagu kasbado, laakiin lacagtu waxay noqon kartaa kaalmo weyn mar kasta oo ay timaaddo.
Xiisaynaya inaad aragto waxaad dib u warshadayn karto si aad lacag u hesho? Weyn - aan u tagno!
Heerka asaasiga ah, dib -u -warshadayntu waxay yaraynaysaa wadarta qashinka deegaankayaga. In kasta oo badeecada dib loo warshadeeyay ee 100% guud ahaan aysan soo saari karin badeecad (waa in lagu daraa qaddar alaab cusub ah).
Si kastaba ha ahaatee, waxaad lacag weyn ka samayn kartaa dib -u -warshadaynta waana sahlan tahay inaad gaadho maadaama aad hore u haysatay waxaad u baahan tahay inaad bilowdo.
Halkan waxaa ah 15 siyaabood oo la yaab leh oo aad lacag dheeraad ah uga samayn karto dib -u -warshadaynta alaabtaadii hore.
Siyaabaha kala duwan ee loo sameeyo lacag dheeraad ah ayaa ku wareegsan, waana waajibkayaga inaan kaa caawino inaad ogaato. Helitaanka lacag ma aha inay ku koobnaato ilaha dhaqanka, waxay tagi kartaa maylka dheeraadka ah.
Dib -u -warshadaynta waxyaabaha aadan u baahnayn ama isticmaalin waa hab fiican oo lagu kasban karo lacag caddaan ah.
Dib -u -warshadayntu waa mid kharash badan oo xitaa lacag baad ka samayn kartaa.
#1. Dib -u -warshadaynta Baabuurtaadii Hore ee Baabuurka
Batariyada baabuurku waxay noqdaan kuwo aan waxtar lahayn marka ay bilaabaan inay jabaan.
Nasiib wanaag, waxaad iyaga ugu beddeli kartaa lacag caddaan ah dukaamadaaga qaybaha baabuurta ee soo socda sida Advance Auto ama AutoZone.
Waxaa lagu siin karaa lacag dhan $ 10 batari kasta. Uma xuma wax laga tagi lahaa garaashkaaga, sax?
Dadka maqaalkan akhriyay ayaa iyaguna akhriya: Sida Loo Bilaabo Ganacsi Afaynaya 2021 | $ 100/hr Lacag Degdeg ah. Fiiri!
#2. Dib -u -warshadaynta Buuggii Hore
Buugaagta aad isticmaashay, qaamuusyada, sheekooyinka iyo buugaag kale oo ku yaal maktabaddaada oo ku mashquulsan ururinta boorka ayaa mid kale caawin weyn u noqon kara.
Haddii aad haysato raso buugaag ah oo aadan dib u isticmaali doonin, waad xaraash kartaa oo lacag baa lagu siin karaa.
DeCluttr waa goob weyn oo lagu iibiyo buugaagta. Waxay iibsadaan buugaag la isticmaalay, farsamo, ciyaaro, iyo waxyaabo kale. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa ku qor koodhka buugga aad rabto inaad iibiso waxaadna heli doontaa qiime deg -deg ah.
Markaa waxaad alaabta ku ridi doontaa sanduuq oo aad ku soo diri doontaa adiga oo adeegsanaya sumadda dhoofinta oo lacag la'aan ah oo DeCluttr kuu soo dirto.
Amazon Trade-In ayaa sidoo kale aad ugu fiican iibinta buugaagta waxbarashada ee aadan mar dambe u baahnayn. Gali ISBN -ka buugga si aad u aragto inta aad heli karto.
Dadka maqaalkan akhriyay ayaa iyaguna akhriya: Halkee si dhakhso leh loogu iibin karaa Buugaagta Maadda ah 2021 | Buugaag Hore & Cusub. Fiiri!
#3. Samee Lacag Iibinta Qashinka Birta
Birtu waa mid ka mid ah qalabka ugu caansan dib -u -warshadaynta. Birta ayaa kor u qaadeysa shaxda maxaa yeelay waxaa dib loo warshadeyn karaa marar badan iyada oo aan wax u dhimin waxqabadka.
Markaa haddii aad haysato biro aan biraha lahayn oo aadan isticmaalin sida naxaas, naxaas, aluminium, naxaas, ama birta birta ah, waxaad ka samayn kartaa lacag fiican.
Markaa haddii aad raadineyso inaad nadiifiso deyrkaaga, ilaaliso bay'ada, oo aad lacag kasbato, qashinka dib -u -warshadaynta ayaa ah waxa habboon in la sameeyo.
Dadka maqaalkan akhriyay ayaa iyaguna akhriya: 10 Siyaabood Oo Lacag Looga Sameeyo Biraha Dusha | $ 200/Maalin. Fiiri!
#4. Iibi Dhalooyinkaaga Dhalada ah
Ma rabtaa hab fudud oo aad ku samayso oo aad lacag ku kasbato? Ka dibna iibso dhalooyinka aad isticmaashay.
Gobolo badan ayaa kaa bixin doona soo celinta dhalooyinkaagii iyo gasacadihii aad isticmaashay.
In kasta oo aanan kugula talineynin inaad ka soo qaadatid dhalooyinka iyo daasadaha beerta deriskaaga, waxaad ka saari kartaa wixii dhalooyin ah iyo daasado qashin ah agagaarka gurigaaga.
Dadka maqaalkan akhriyay waxay kaloo akhriyaan: 7 Meelood oo lagu deeqo Muraayadaha indhaha 2021 -ka. Fiiri!
#5. Dib -u -warshadaynta Cartridges -kaaga
Haddii aad haysato farabadan khadado khad ku jira khaanaddaada, waxaad samayn kartaa lacag badan adiga oo iibiya ama dib -u -warshadaynaya.
Waxaad ku iibin kartaa kartriddaada khad meelaha sida Craigslist ama eBay. Iibinta walxaha onleenka waa mid aad u fudud maxaa yeelay waxaad abuuri kartaa boosto gaar ah oo aad ka iibin kartaa dadka aaggaaga.
Kartoon kasta oo khad madhan ah oo aad soo gasho waxay ku dhalin kartaa $ 2 deynta dukaanka.
#6. Ku iibi Wine Corks eBay
Haddii aad tahay taageere khamri ah, waxaad u rogi kartaa raasaska khamriga ee la ururiyey sanadihii la soo dhaafay lacag caddaan ah.
eBay waa meel fiican oo laga bilaabo iibinta koofurkaaga khamriga Waxaad ku iibin kartaa iyaga oo farabadan, dheh 10, 20 - ama in ka badan.
In kasta oo dib -u -warshadaynta dib -u -warshadayntu aysan kaa dhigi doonin milyaneer, haddana hubaal waxay bixin doontaa dhalo kale oo khamri ah (ama laba).
#7. Iibi Korontadaada
Elektarooniggaagii hore ayaa jeebkaaga ku siin kara lacag caddaan ah oo dheeraad ah. Tusaale ahaan, haddii aad haysato dhowr taleefan oo duug ah oo ag -yaal, waad iska iibin kartaa sidii qashin oo aad ka samayn kartaa lacag qabow.
Shirkado badan ayaa bixiya lacag tiknoolajiyada. Qaado Decluttr, tusaale ahaan. Waa barxad kuu oggolaanaysa inaad iibiso taleefankaagii hore, kiniiniga, daawato ama xitaa iibsato taleefannada la isticmaalay.
Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad samayso waa dib -u -warshadaynta taleefannadaas oo aad kasbato lacag caddaan ah oo aad ugu adeegsan karto aalad cusub.
#8. Dib u warshadee sanduuqyada kartoonka ee aad isticmaashay
Kartoonka la isticmaalay wuxuu u noqon karaa il kale oo dakhli dheeraad ah.
Haddii aad ka dalbato Amazon, waxaa laga yaabaa inaad xannuunsan tahay sanduuqyo badan oo kartoon ah. Halkii aad u uruurin lahayd carruurtu si ay ugu ciyaaraan oo ay qashin u dhigaan, waad iibin kartaa ama dib u warshadayn kartaa.
Waxa laga yaabaa inaadan ogayn inay jiraan meelo aad ku bixin doonto kartoonkaaga la isticmaalay.
Tusaale ahaan, BoxCycle wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku qorto sanduuqyada kartoonkaaga khadka tooska ah ka dibna soo hel iibsadayaasha doonaya inay istaagaan oo soo qaadaan sanduuqaaga oo ku soo celiyaan, lacagta ay hayso BoxCycle ka dibna ku soo noqo PayPal markii la qaado.
#9. Dib -u -warshadayso Qaboojiyaha Shaqada ee La tuuro iyo A/Cs
Qaboojiyahaagii hore ee gurigaaga ma noqon karo mid aan waxtar lahayn. Dhab ahaan waad dib u warshadayn kartaa oo lacag baad ka samayn kartaa.
Tusaale ahaan, “Waxaan xusuustaa inaan u guuray guri cusub waxaanan guriga ka helay qaboojiye duug ah oo loogu talagalay qofkii hore degganaa. Waxaan diyaar u ahaa inaan ka guuro, ilaa aan ka ogaaday in korontada maxalliga ah ee nagu xeeran ay bixin karto si aan u qaato.
Waxaan ficil ahaan ka sameeyay $ 50 kaar hadiyad ah barnaamijka dib -u -warshadaynta. ”
Barnaamijyadan dib -u -warshadaynta waxay kaloo aqbalaan qaboojiyeyaasha shaqeeya, markaad dib -u -warshadaynta qaboojiyaha, oo aad iyaga siiso $ 25. Si kastaba ha noqotee, dhammaan shirkadaha korontada ma bixiyaan tan, marka hore iska hubi taada.
#10. Iibso Saliidda Karinta ee Aad Adeegsatay
Biodiesel waa warshad aad u weyn, waxayna u baahan yihiin saliid wax lagu karsado.
#11. Samee Lacag Dib -u -warshadaynta Boostadaada Qashinka ah
Saliidda karinta ma aha waxa kaliya ee aad dib u warshadayn karto. Boostada qashinka waa shay kale oo dhalin kara dakhli dheeraad ah.
Celcelis Mareykan ah wuxuu helaa ilaa 30 sanduuq qashinka ah.
Tani waxay kuu noqon kartaa wax aan lagaa rabin laakiin waxa aad ugu yeerto adiga oo aan loo baahnayn waxay dahab u noqon kartaa cilmi -baarayaasha suuq -geynta baaraya xayeysiiska boostada tooska ah.
Tusaale ahaan, Xarunta Aqoonta Ganacsiga Yaryar waxay ku siin doontaa lacag si aad ugu dirto spam -kaaga iyo dalabyada emaylka ee alaabada iyo adeegyada sida kaararka deynta, caymiska, isgaarsiinta, iyo dharka.
#12. Dib -u -warshadaynta Rasiidhadaada
Baarayaasha suuqa ayaa sidoo kale danaynaya rasiidhada alaabta aad ka iibsato dukaanka.
Tusaale ahaan, qaar ka mid ah adeegyada cilmi -baarista suuqa ayaa diyaar u ah inay soo celiyaan rasiidhadaada.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad sawir ka qaadatid risiidhka aad wax ku iibsatay si aad ugu qalanto lacag caddaan ah. Marka koontadaadu gaarto $ 20, waxaad ku codsan kartaa jeeg boostada. Waxa kale oo aad lacag ku kasban kartaa adiga oo tixraacaya saaxiibbada adeegsada dalabyada.
#13. Dib -u -warshadaynta Aluminiumkaaga
Dib -u -warshadaynta aluminiumku waa mid ka mid ah qaababka ugu caansan ee dib -u -warshadaynta. Xaqiiqdii, aluminiumku waa mid ka mid ah agabka ugu fudud ee dib -u -warshadaynta, iyo sidoo kale mid ka mid ah kuwa ugu qiimaha badan.
Tamarta lagu keydiyo dib -u -warshadaynta aluminiumka ayaa ku filnaan karta in la dhegeysto albaab dhan oo ku jira iPod.
Dadka Maraykanku waxay 800 milyan oo doolar ka helaan dib -u -warshadaynta aluminiumka. Waxaa la yaab leh, taasi waa 67% oo kaliya dhammaan daasadaha aluminiumka - bilyan doolar oo kale ayaa la tuuraa.
Haddii aadan hadda dib -u -warshadayn dhammaan aluminiumkaaga, soo -celinta waa habka ugu fudud ee dib -u -warshadaynta lacagta.
#14. Ku biir RecycleBank
RecycleBank waa barnaamij ku siin doona dhibco aad ku samayso (oo aad ku ilaaliso) ballanqaadyo kala duwan, sida ku biiridda beerta bulshada.
Waxaad kasbataa dhibco dhammaan hawlahan, kuwaasna waxaa lagu soo furan karaa heshiisyada maxalliga ah. Tusaale ahaan, waxaad 50 dhibcood ugu beddeli kartaa kuuban $ 1 marka loo eego $ 5.
#15. Barnaamijyada TerraCycle
TerraCycle waa urur la shaqeeya meheradaha iyo ka-faa'iideystayaasha kale si ay u abuuraan barnaamijyo dib-u-warshadayn oo loogu talagalay waxyaabaha adag-dib-u-warshadaynta.
Kuwani waa waxyaabaha xarunta dib-u-warshadaynta ee xaafaddaadu aanay u qalabayn inay wax ka qabato, sida bacaha cuntada ilmaha ee keli ah, bacaha jajabka ah, iyo tuubooyinka cadayga caagga ah.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan barnaamijkan ayaa ah inaad dib-u-warshadayn karto alaab aad u adag oo dib-u-warshadaynta waxaadna u heli kartaa dhibco urur aan faa'iido doon ahayn ama dugsi.
Nidaamka dhibicdu wuxuu ku siinayaa 2 dhibco shixnado ka badan 7 rodol iyo 1,000 dhibcood oo kasta waxaa lagu soo furan karaa $ 10.
Sida Loo Recycle Your Stuff Stuff
Alaabta oo dhan dib looma warshadeyn karo, laakiin waxaa jira siyaabo lagu yareeyo qashinka hal mar la isticmaalo, dib loo warshadeyn karo iyo in kale. Waa kuwan dhowr ka mid ah:
Warshadaha dharka ayaa ka mid ah kuwa ugu wasakhaysan meeraha, qofka caadiga ahna wuxuu adeegsadaa in ka badan 80 rodol oo dhar ah iyo dhar sannadkiiba.
Wax -soo -saarku wuxuu kaa caawin karaa dib -u -dhigidda qashinkan oo isla markaasna kuu badbaadiyo lacag.
#2. Iyaga ku deeq
Markaad nadiifinayso kabadhadaada, ha iska tuurin ciyaarta guddiga, kabahaas aadka u yaryar, ama xidhmada DVD-yada.
Beddelkeeda, u samee sanduuq tabaruc alaab u tagi karta raalli ahaanshaha maxalliga ah: dharka, alaabta jikada, gogosha, iyo xitaa noocyada alaabta guriga iyo elektaroonigga.
Intaa waxaa dheer, 90% wixii ka soo baxa tabarucaadkaaga waxay aadeysaa adeegyada aan macaash doonka ahayn ee bulshada dhexdeeda-waa xal guul wada leh.
#3. Qaadashada Habka Compost
Laga soo bilaabo diirka baradhada iyo godadka tufaaxa ilaa kafeega, ukunta, iyo xitaa sanduuqyada pizza, qashin la yaab leh ayaa la qasi karaa.
Haddii aad ku rakibi karto weel bacrimin ah ama aad ku leedahay barnaamij bulsho meel u dhow, isku day inaad bacrimiso. Waxay kala goyn kartaa qashinka guriga badhkeed iyada oo gacan ka geysanaysa yareynta qiiqa kaarboon laba ogsaydh ee qashin -qubka.
Waad kordhin kartaa shayga cimrigiisa adigoo helaya siyaabo aan caadi ahayn oo dib loogu isticmaalo. Isticmaal weelkan shumaca galaaska madhan si aad u kaydiso xargaha caagga ah ama suufka suufka ah.
U beddel funaanaddan duugga ah maro boodh leh, toy bisad, ama roog-xidh. Neef cusub ku neefso kursiga hore ee deyrka leh oo leh jaakad rinji buufin ah.
Haddii aad carruur leedahay, ku dhiirrigeli inay kaalin firfircoon ka qaataan dib -u -warshadaynta iyo hagaajinta alaabta guriga.
Waxa Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Shirkadaha Dib -U -warshadaynta
Dib -u -warshadaynta qashinka ayaa fursad weyn u ah shirkadaha ka shaqeeya maareynta qashinka. Si aad lacag uga hesho tan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato wax ama laba ku saabsan geedi socodka oo dhan.
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad go'aamiso goobta saxda ah ee meheraddaada - waxay u baahan tahay in laga dhiso meel ku xeeran qashin -qubka wanaagsan maxaa yeelay waxaad doonaysaa in meheraddaadu sii socoto muddo dheer.
Midda labaad, mar walba way wanaagsan tahay in lala shuraakoobo qashin -qaadayaasha maxalliga ah.
Saddexaad, soo ogow shatiyada aad u baahan tahay iyo sharciga gaarka ah. Ruqsadahaan waa: shati ama ruqsad hawlgal; kormeerka iyo u hoggaansanaanta xeerarka amniga; liisanka deegaanka.
Ta afaraad, wax ka ogow qorshaha maaraynta qashinka adag ee degmada ama gobolka aad ka bilaabi doonto meheraddaada.
Samaynta qashinka dib -u -warshadaynta lacagtu waa mid ka mid ah mawduucyada aadka looga doodo ee ka mid ah shirkadaha dawaynta qashinka. Waa kheyraad na weheliya bilowgii waxqabadkii aadanaha. Waad dib -u -warshadayn kartaa ama u isticmaali kartaa si aad u dhaliso tamar. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u beddeli kartaa tan tan qashinka ah khasnad.
Sida Loo Bilaabo Ganacsi Afaynaya 2022 | $ 100/hr Lacag Degdeg ah
15 Siyaabood oo lacag looga helo ciyaaraha 2022
15 Siyaabood oo Lacag looga Heli Karo Guriga Adigoo Ilmo ah 2022
10 Kayd ee Ganacsiga Swing Best ee 2022
U guurista waddan kale waxay u ekaan kartaa aragti qaali ah: dalbashada fiisaha, dhoofinta alaabta guriga, helitaanka…
Xisaabta Kaydka Ganacsi ee ugu Sareeya ee 10 ee ugu Sareeya 2021
Ma waxaad raadinaysaa inaad furto koontada kaydka shirkadaha wax soo saar sare leh si aad u ilaaliso lacagtaada oo aad u hesho dulsaar?…
Gobol kastaa wuxuu siiya faa'iidooyinka caymiska shaqo la'aanta shaqaalaha laga ceyriyay shaqada iyada oo aan wax khalad ah…